တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: IDM 6.18 Build 1 (Just Double Click to Install 10000% Working)
IDM 6.18 Build 1 (Just Double Click to Install 10000% Working)
ဒီ IDM လေးကတော့ Crack,Patch တွေ မလိုတော့တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် IDM ပါ .. Serial Key , Email တွေနဲ့ Register လုပ်ပေးစရာမလိုပဲ Full Version အဖြစ် အမြဲသုံးနိုင်မှာပါ... ပြီးတော့. မြင်နေကျပုံစံလေးမဟုတ်တော့ပဲ ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးနဲ့အမြင်ဆန်းစေဦးမှာပါ...။
ဒီ IDM ကို Download မလုပ်ခင် စကားအနည်းငယ်ပြောပါရစေ....
ဝင်းကမ္ဘာကျော် (နည်းပညာမှတ်တမ်း) Website ကို လာလည်ကြရင်း တချို့က ဒေါင်းမရလို့ ၊ တချို့က Software လေးလိုချင်လို့ ၊ တချို့က ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လို ပြဿနာတတ်နေလို့ ကူညီပါ ၊တချို့ကကျတော့ မေးတာ ပြန်မဖြေလို့ ဆိုပြီး မထိတထိ ပြောသွားတာမျိုးတွေတောင် ရှိပါသေးတယ် နေ့စဉ်လိုလို Email , C-Box , Facebook ကနေ မေးနေ ၊ ပြောနေကြတာပါ...
အဲ့ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နည်းနည်း ရှင်းပြပါရစေ... များသောအားဖြင့် ကျနောတို့ ဒီ Website ထဲမှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ် တကယ်လိုအပ်တဲ့ Software တွေ ၊ လေ့လာသင့် ရှိထားသင့်တဲ့ PDF စာအုပ်တွေ ၊ Zawgyi မြန်မာ Font အသုံးပြုပုံတွေနဲ့ အခြား ကွန်ပျူတာမှာ အမြဲဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်းလမ်းတွေကို စုံစုံ လင်လင် တင်ပေးထားပါတယ်...
ဒီ Website ထဲက Software တွေ ဒေါင်းမရတာမျိုး ၊ လိုချင်တာ ရှာမရတာမျိုး ၊ Software တွေ နည်းလမ်းတွေ မတောင်းဆိုခင်... ကျေးဇူးပြု၍ ဆိုက်ဒ်ရဲ့ ညာဘက် C-box အောက်က "Read Me Please" ကို နှိပ်ပါ သည်းခံပြီး အရင်ဆုံး ဖတ်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပရစေ... ဖတ်ပြီးရင်တော့ အားလုံး မဟုတ်တောင် တချို့တစ်ဝက် အဆင်ပြေသွားစေမှာပါ....;)
တချို့မေးတာလေးတွေ ပြန်မဖြေနိုင်တာကတော့ အချက် (၂) ချက်ရှိပါတယ် ... ပထမ တစ်ချက်က ကျနော်တို့ဟာ ကိုယ့်စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်တဖက်နဲ့မို့ မအားလို့ ပြန်မဖျြေနိုင်တာပါ..... ဒုတိယ တစ်ချက်ကတော့ မေးတာ မရှင်းလင်းတာကြောင့်ရယ် ၊ မေးထားတဲ့ ကွန်ပျူတာ ပြဿနာဟာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် မတွေ့ကြုံဖူးသေးတဲ့အတွက် တကယ် မသိ၊နားမလည်တာကြောင့်ရယ်ပါ ... ကိုယ် တကယ်မသိပဲ ရမ်းသမ်းပြီး နည်းပေးလိုက်လို့ အဲ့ဒီ ကွန်ပျူတာ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားမှာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး ... အဲ့ဒီလို အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် ပြန်မဖြေနိုင်တာလေးတွေ ရှိခဲ့ရင် အားလုံး မေတ္တာ ရှေ့ထားပြီး နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်မျာ....:)
No Need Crack,Patch Just Double Click to Install . Done !!! Enjoy !!!
( ဒီ IDM ကို Install မလုပ်ခင် တချို့စက်တွေမှာ အရင် ရှိနေတဲ့ Version အဟောင်းကို ထုတ်ပစ်ဖို့ (Uninstall) လိုမှာပါ ဒီပို့စ်ထဲက အတိုင်းထုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်)
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ ZIP ဖိုင်ကို ဖြည်ပါ..
Internet Download Manager 6,18.exe ကို Double Click နဲ့ Run လိုက်ပါ...
ကျန်တာတွေကိုတော့ အောက်က ပုံလေးတွေအတိုင်း နှိပ်ပေးရုံပါပဲ...
ပြီးပါပြီ .. ဘာ Register မှ လုပ်ပေးစရာမလိုတော့ပဲ Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်း သုံးလို့ရသွားပါပြီ..။
အားလုံးပြီးသွားရင် Desktop ပေါ်မှာ IDM Logo လေးနဲ့အတူ Shortcut လေး (၃) ခုရောက်လာမှာပါ.. အမြင်မှာ ရှုတ်နေတယ်ဆိုရင် IDM Shortcut လေးကို ချန်ထားပြီး ကျန် (၂) ခုကို Delete လုပ်ပစ်နိုင်ပါတယ်...